Egypt: Dalxiisayaal lagu diley dalka Masar, weerar mindi loo adeegsadey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Egypt: Dalxiisayaal lagu diley dalka Masar, weerar mindi loo adeegsadey
Egypt: Dalxiisayaal lagu diley dalka Masar, weerar mindi loo adeegsadey
Posted: Abdirizak Shiino - July 14, 2017
Laba qof oo u dhashey dalka Jarmalka ayaa la diley afar kalena waa la dhaawacay kadib weerar mindi loo adeegsadey oo ka dhacay magaalada fasaxa loo tago ee Al-Qardaqah ( Hurghada) ee dhacda xeebta badda cas.
Wasaaradda Arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa sheegtey in gacanta lagu dhigey qofkii weerarka geystey.
Gen. Mohamed El-Hamzawi oo ah madaxa amniga gobolka dhaca Badda cas ee dalka Masar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay dhimashada laba qof kuwaas oo dhalahsadoodu tahay Jarmal. Warar kale oo ay qoreen warbaahinta qar ayaa sheegaya in afarta qof ee la dhaawacay laba kamid ah ay u dhasheen Jamhuuriyadda Czeck.
Sida uu sheegay telefishanka laga lee yahay dalka Jarmalka ee DW, wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalku weli ma caddeyn magacyada dadka la diley iyo kuwa la dhaawacay.
Labada qof ee la diley ayaa ah haween dalxiis ku joogay Masar.
Sanadkii hore 2016 bishii Janaayo ayey ahayd isla magaaladan Hotel ku yaala in werar mindi ah lagu qaadey dalxiisayaal, waxaana toorey la galiyey saddex kamid ah.
Dalka Masar oo dhaqaalihiisu si weyn ugu xirnaa dalxiiska ayaa waxaa si weyn hoos ugu dhacay suuqa dalxiiska, laga soo bilaabo kacdoonkii Masar, waxaana muddooyinkii danbe si tartiib ah dib ugu bilaabanaayey dalxiiska iyada oo dalxiisayaashu si weyn u jecel yihiin dalka Masar.